September 20, 2011 – democracy for burma
2011-Humanitarian Impact of Landmines in Burma/Myanmar-engl
A KNU source said ITD company officials do not want to publicize or acknowledge the conflict surrounding the Tavoy Development Project it might jeopardize trust from their investors or shareholders. Continue reading “KNU tightens construction ban on Tavoy to Kanchanaburi Road” →
On September 20, 2011 September 20, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
JOIN THE WORLDWIDE READING
English PEN (www.englishpen.org) and the Free Burma VJ campaign (www.freeburmavj.org/) are organisingaWorldwide Reading to pay tribute to Burma’s Silenced Poets and we’d love you all to get involved…
On 21 October · 12:00 – 13:00 we will be hosting public readings of poetry by our imprisoned colleagues including Zarganar, Zaw Thet Htwe, Nay Phone Latt, U Zeya and Min Ko Naing, in order to raise and maintain awareness of their plight and of all those currently detained in Burma.
We already have events lined up in England, France and Thailand, but to help our message that these writers should be released immediately get through loud and clear we are hoping that PEN centres, other campaigning groups and individuals all around the world will take part by organisingasimilar event in your own country.Please join us in givingavoice to our silenced colleagues and in paying tribute to their incredible courage in the face of continued persecution. Together we can sendastrong message to the authorities in Burma that these writers have not and will not be forgotten.
To ensure that this initiative lives up to its name, we are looking for people all around the world that would be willing to organiseapublic reading of work by imprisoned Burmese poets. Readings can take place outside the Burmese Embassy in your country, if there is one, or in any other public place – the busier, the better! Continue reading “Burma: English PEN and the Free Burma VJ campaign “Worldwide Reading “to pay tribute to Burma’s Silenced Poets On 21 October” →
Book About KNDO Major General Mahn Kyaw Thoung
အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးနိုင်ရေး ဝ တပ်ဖွဲ့အတွင်းအစည်းအဝေးလုပ်
အစိုးရသစ်နှင့်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်က ဝ တပ်ဖွဲ့အတွင်း အစည်းအဝေး တရပ် ကျင်းပ။ သိန်းစိန် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် တင်ပြ သော အချက် ၄ ချက်အား လက်မှတ်ထိုးကြခြင်း မှာလက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေး လဲလှယ်ခြင်း မဟုတ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်နက်နှင့် ကာကွယ်ဖို့အတွက် သာဖြစ်ကြောင်း ဝ အရာ ရှိပြော။
အစိုးရသစ်နှင့်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်က ဝ တပ်ဖွဲ့အတွင်း အစည်းအဝေး တရပ်ကျင်းပ။ သိန်းစိန် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် တင်ပြသော အချက် ၄ ချက်အား လက်မှတ်ထိုးကြခြင်း မှာလက်နက်နှင့်ငြိမ်းချမ်း ရေး လဲလှယ်ခြင်း မဟုတ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်နက်နှင့် ကာကွယ်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ကြောင်း ဝ အရာရှိပြော။ ၂ ဖက် ဝန်ထမ်းများ ရုံးပြန်စိုက်ရေးဟူသည့်အချက်တွင် အစိုးရ၏ ပညာ ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် တွင်ပါရှိ။ လူ ၂၀၀ ခန့် တက်ရောက်။
သံဃာတော်များပါမကျန် မြန်မာစစ်တပ်၏ ကာဗာအဖြစ် အသုံးချခံရ
၁၇ ရက်နေ့က ခိုလမ်မှလာသော မြန်မာစစ်တပ် ခလရ ၁၃၁ ၏ ရိက္ခာတင်ကား ၈ စီးကျေးသီးမြို့နယ် မိုင်းနောင်-မိုင်းနန်း-ဝမ့်ဖိန်း-နောင်ဆွမ်းဖက်သို့ အတက် ဒေသခံများအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား။ သံဃာတော်များပါ မကျန် ၎င်းတို့စစ်ယာဉ် တန်းကြားညှပ် ကာဗာအဖြစ်အသုံးပြု။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကားကိုပါ ချောဆွဲရိက္ခာတင် ပေးခိုင်း။
၁၅ ရက် နေ့ခင်းပိုင်းက ယာခင်းသွားခုတ်သူ တန့်ယန်းမြို့နယ် တောင်ဟျိုးအုပ်စုဒေသခံရွာသားစိုင်းပန်တဝ အား အင် အား ၈၀ ခန့်ရှိ မြန်မာစစ်တပ် ခလရ ၂၄၈ က ပစ်သတ်။ အဆိုပါ မြန်မာစစ် ကြောင်းမှာ မိုင်းရှူး- မိုင်းအောတ်မှ ထွက်လာ ှသည့် စစ်ကြောင်းဖြစ်ကာ စိုင်းပန်တဝ နေထိုင်သည့် နားဟုန်းရွာ၏ တောင်ဖက်၌ ပစ်သတ်ခြင်းဖြစ်။ စိုင်းပန်တဝ (အသက် ၃၆ နှစ်) တွင် ဇနီး နန်းစိန်ထွန်းနှင့် သားသမီး ၃ ယောက်ကျန်ရှိ။